Qodobo xasaasi ah oo looga dooday shirka Magalada Dhuusamareeb - Awdinle Online
Qodobo xasaasi ah oo looga dooday shirka Magalada Dhuusamareeb
Shirka wadatashiga Madaxda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ee ka socda Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa xalay aad looga dooday qodobo xasaasi ah oo kamid ahaa kuwa dhaliyay khilaafka kajira doorashooyinka.
Qodobada laga dooday ayaa waxaa kamid ah arrinta doorashada Xildhibaannada gobolada Waqooyi, iyadoo Madaxda Dowlad Goboleedyada la hadleen Guddoomiye Cabdi Xaashi, laguna wargeliyay arrinta Somaliland inay ka soo heshiiyaan isaga iyo Ra’iisul Wasaare Kuxigeenka, ayna wixii ay ka soo wada hadlaan u soo gudbiyaan shirka.
Sidoo kale Madaxda ayaa si adag waxaa ay uga doodeen arrimaha Gobolka Gedo oo dood adag ay ka taagan qeybna ka ah waxyaabaha dhaliyay khilafka doorashooyinka iyo Arrimaha guddiyada doorashooyinka oo inta badan xubnaha mucaaradka ay kasoo horjeesteen.
Madaxweynayaasha Puntland & Jubbaland ayaa markii dambe shirka isaga baxay, waxana shir gaar ah yeeshay Madaxweyne Farmaajo, Ra’iisul Wasaaraha, Madaxda Saddexda Dowlad Goboleed iyo Gobolka Banaadir, iyaga oo sigaar ah uga hadlayay Arrimaha la isku haayo.
Shirka wadatashiga Madaxda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ee ka socda Magaalada Dhuusamareeb ayaa Maanta galaya maalintii labaad, waxaana uu yahay mid Isha lagu wada haayo.
Previous articleGanacsato farabadan oo lagu xir xiray Magaalada Boosaaso
Next articleDagaal ka dhacay Magaalada Beledweyne